Ireo mpandeha fitsangantsanganana dia faly nitsidika an'i Jamaika taorian'ny fiandrasana roa taona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ireo mpandeha fitsangantsanganana dia faly nitsidika an'i Jamaika taorian'ny fiandrasana roa taona
Vaovao Mafana • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
HM GIFT - Ny minisitry ny fizahantany, Hon Edmund Bartlett (ankavanana), dia nahazo an'i Kapiteny Isidoro Renda, kininina kely an'ny Carnival Sunrise, izay niantsona tao Ocho Rios ny alatsinainy 16 aogositra 2021 niaraka tamin'ny mpandeha sy ekipa maherin'ny 3,000, nanao sonia ny fanombohana ny asa fitsangantsanganana an-tsambo any Jamaika, taorian'ny fiatoana naharitra 17 volana noho ny areti-mandringana COVID-19.
"Tena mahatalanjona tokoa, niandry roa taona an'izany," hoy i Terry Davis rehefa nandinika ny tontolon'ny Jamaikana niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy, Katy Peale izay nanampy hoe: "Mahafinaritra fotsiny ny mivoaka, mivezivezy, mahita toerana tsara indray, miaraka. miaraka amin'ny namana sy fianakaviana; maka fahafinaretana."
Ity no sambo fitsangantsanganana voalohany niantso tany amin'ny seranan-tsambon'ny ranomasin'i Jamaika hatramin'ny nahavoafody 19 COVID-17.
Ny mpivady voalohany nidina dia avy any Miami, Florida, niaina ny fitsangantsanganana an-tsambo voalohany tany Jamaika.
Inona no nandrasan'izy ireo? Zava-pisotro! “Ny kafe tsara indrindra eto an-tany, Blue Mountain,” ary “totohondry”.
Ny mpivady dia tamin'ny dia an-tsambo voalohany nankany Jamaika ary nankafy ny toerana rehefa avy nidina ny Carnival Sunrise tao Berth 1 amin'ny Ocho Rios Cruise Shipping Port. Io no sambo fitsangantsanganana voalohany niantso tao amin'ny seranan-tsambo tao an-toerana tao anatin'ny 17 volana hatramin'ny nitrangan'ny valanaretina COVID-19.
Miaraka amin'izy ireo ny mpivady voalohany nandeha an-tongotra ny tany Jamaikana ho isan'ny fitsangatsanganana an-tsambo any Karaiba, manomboka any Miami. Donna sy Anthony Pioli avy any Miami dia tena niresaka manokana momba izay tena tadiavin'izy ireo nandritra ny fotoana nialan'izy ireo tany Ocho Rios, izay efa tany Montego Bay teo aloha. Taorian'ny fiandrasana 17 volana dia niandrandra ny “kafe tsara indrindra eran'izao tontolo izao, Blue Mountain” i Anthony raha ho an'i Donna kosa, “mitady totohondry aho.”
Ny hafaliana dia nizara ny kapitenin 'i Carnival Sunrise, Isidoro Renda. "Ny tenako, ny ekipazy rehetra ary ny Carnival Cruise Line iray manontolo, faly tokoa izahay hamerina indray ary manana ny antso voalohany ao Jamaika, ”Hoy izy nanondro ny“ fifandraisana lava be amin'i Jamaika sy Ocho Rios, ka faly sy faly tokoa izahay eto. ”
Ocho Rios dia anisan'ny seranan-tsambo lehibe an'ny Sunrise aorian'ny 17 volana “ary ho tonga eto matetika isika,” hoy izy nizara, nanisa ny fandaharam-potoana ho "intelo isam-bolana farafahakeliny."
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett dia teny amin'ny seranana ho azy ary ho azy: "Ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana amin'izao fotoana izao dia manondro ny dingana faharoa manakiana ny fisokafan'ny indostrian'ny fizahantany ary tena hanampy amin'ny famerenana ireo asa ho an'ny indostria."
Miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'i Carnival misy antso 16 mandritra ny telo volana ho avy ary miomana amin'ny famerenana sambo ny Ranomasina Karaiba ny MSC, Royal Caribbean, Disney ary ireo sambo fitsangantsanganana hafa: », Hoy Andriamatoa Bartlett. Tetikasa fitsangantsanganana an-tsambo 300,000 XNUMX fotsiny no vinavinany mpandeha mankany Jamaika amin'ny faran'ny taona, amin'izay fotoana izay ny seranan-tsambon'i Montego Bay sy Falmouth dia havaozina indray miaraka amin'ny fanantenana hanana antso ihany koa ao Port Royal sy Port Antonio.
Momba ny fifikirana amin'ny kaonty COVID-19, dia nilaza ny minisitra Bartlett fa nomena ny fepetra napetraky ny masoivoho misahana ny fahasalamam-bahoaka eo an-toerana sy iraisampirenena: ny fiovan'ny virus sy ny fiovan'ny viriosy, ary avy eo hiatrehana ny fihetsika, ny fitondran-tena ary ny toe-tsaina. ”
Ireo mpandeha 3,000 sy ekipa mpiangona ao amin'ny Carnival Sunrise dia tsy maintsy nihaona tamin'ny fepetra henjana mifehy ny fanombohana ny fandefasana sambo fitsangantsanganana an-tsambo, mitaky 95% eo ho eo hanaovana vaksininy feno ary ho an'ireo mpandeha rehetra hanome porofon'ny valiny ratsy avy amin'ny fitsapana COVID-19 natao tao anatin'ny 72 ora niondrana an-tsambo. . Raha ny mpandeha mbola tsy voamarina, toy ny ankizy, mandidy ny fitsapana PCR, ary ny mpandeha rehetra koa dia voasivana sy voasedra (antigen) rehefa mivoaka ny fiara.
Ary koa, ny seranan-tsambo dia nihaona amin'ireo kaonty napetraky ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ireo orinasan-dranomasina, miaraka amin'ny orinasan'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany (TPDCo) izay manara-dalàna ihany koa.
Nahazo isa be i Jamaika noho ny fanatanterahana ny fanantenana. “Tena tiako ny manararaotra izao fotoana izao hisaorana ny Minisiteran'ny Fizahan-tany ny Fahefana Port ao Jamaika, ary ny minisiteran'ny Fahasalamana indrindra; Ny ekipan'ny fahasalamanao iray manontolo dia tena nandray anjara tamin'ny fanatontosana ny sambo androany ary mihoatra ny fanantenantsika izany, "hoy i Marie McKenzie, filoha lefitry ny Global Ports sy ny Fifandraisan'ny governemanta Karaiba. Ramatoa McKenzie, izay Jamaikana, dia tompon'andraikitra amin'ny firenena 27 ao amin'ny faritra, ary niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny karnaval.